Ityala elothusayo leMveliso yeCwecwe | Ityala laseTshayina lokuThintela ukuSebenza kwaBenzi beThebhulethi, abaXhasi
Ityala lokuchasana nokuwa kwesotballproof ye-Samsung galaxy tab ye-A7 lite 8.7 2021 ngentambo yegxalaba
Ukuhambelana kwimeko eyilelwe ngokukodwa KUPHELA iyahambelana ne-Samsung Galaxy Tab A7 lite 8.7 intshi 2021 Imodeli: SM-T220 / T225) AKULUNGELE i-Samsung Tab A7 10.4 intshi 2020 ukukhutshwa (Imodeli: SM-T500 / T505) ithebhulethi. okanye naziphi na ezinye iipilisi zemodeli. Nceda ujonge inombolo yemodeli kunye nekhamera ngaphambi kokuthenga. Khulula izandla zakho ngentambo ephathekayo yamagxa, luyilo oluyingqayizivele labantwana abahamba / abahambahambayo, abayili bezakhiwo, iiarhente zezindlu, abasebenzi bezokwakha kunye nomsebenzi ...
Ityala elothusayo elicacileyo lokuBuyela umva ngePad Air Air 4 10.9 intshi 2020 Ukukhutshwa
Yenzelwe ngokukodwa i-iPad Air 4th Generation 10.9 Inch 2020 (Inombolo yemodeli: A2072 / A2316 / A2324 / A2325). Ayihambelani nezinye izixhobo. Faka isicelo sangaphandle se-PU yesikhumba, kunye nesakhelo se-TPU esithambileyo esineekona eziphuculweyo kunye ne-crystal clear back. I-Acrylic Hard iqweqwe elingasemva kunye nokuguquguquka kwe-TPU bumper ikhusela i-iPad yakho kwiminwe yeminwe, ukothuka, ukuhla ngengozi kunye neempembelelo. Umphambili wangaphakathi we-microfiber uthintela ithebhulethi yakho ukuba ingakhuhle. Kwaye ikristale ecacileyo yangasemva iya kuqhayisa ...
I-360 ejikelezayo yeTyala eliKhulu loMthwalo oMangeleyo we-IPad ye-Samsung yeTablet yeLenovo
UMSEBENZI WOKHUSELEKO OLUNAMANDLA Ityala linokwakheka kathathu: iqokobhe langaphakathi elinzima le-polycarbonate, iqokobhe langaphandle le-silicone kunye nesakhelo sangaphambili, Ikhusela isixhobo sakho kwimikrwelo nakumaqhuma ngaphandle kokongeza ubuninzi. I-360 DEGREES ROTATABLE Adjustable HAND-STRAP I-strap hand-adjustable ilungele abafundi, ugqirha, ootitshala okanye nabani na ofuna isandla esisodwa emsebenzini okanye ekufundeni. Nokuba ngumntwana okanye umntu omdala, unokuhlengahlengisa ukuqina komtya ukuze abasebenzisi bakhululeke ...
I-Slim Shockproof Rugged Case ye-ipad ye-Samsung kwitafile yeLenovo
UMSEBENZI WOKHUSELEKO OPHELELEYO Ityala linetyala elithambileyo langaphakathi le-silicone ukukhusela kwizothuso kunye nokuhla, kunye nomaleko oqinileyo, onzima wePC ongaphandle wokuqiniswa kunye nenkcazo. Ukucheba ngokuchanekileyo ukusika umngxunya ngokuchanekileyo kuvumela ukufikelela ngokulula kuwo onke amaqhosha, ulawulo kunye namazibuko ngaphandle kokususa imeko. Zonke iziseko, amazibuko kunye namaqhosha ziyafikeleleka ngaphandle kokususa imeko. NGOKUKHALISA NGOKWAKWAKWAKHO okuyilelwe ngaphakathi okuvumela ukuba wenze iifowuni ezingenazandla, ufunde, okanye ubukele imovie naphi na ...